लोकेन्द्र बिष्टलाई प्रकाश दाहालको यस्तो छ कडा जवाफ – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
फरक शैलीमा घरदैलो गर्दै चितवनका काँग्रेस वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पहाडमा भोट माग्दै पाँच वर्षभित्र देशलाई कायापलट गर्छौं : ओली लागू औषध सहित दुई पक्राउ गोरखाको २७ मतदान केन्द्रमा हेलिकप्टरबाट मतदान सामग्री लगियो साईराम डेन्टलद्धारा विद्यार्थीहरुको निशुल्क दन्त परिक्षण, हेरौँ ५ फोटो उम्मेद्वार नै बाम गठबन्धनमा प्रवेश बढुवामा परेका चार एआइजीले जिम्मेवारी पाए विप्लव असफल हुँदै गएको छ : नेता पुन फेरी घट्यो सुनको भाउ
२९ आश्विन २०७४, आईतवार १०:०८
काठमाडौं ,२९ असोज । केही दिन अघि मात्र वाम गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेका लोकेन्द्र विष्टमगरलाई माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालले कडा जवाफ फर्काएका छन् ।
विष्टलाई यस्तो दाहालको जवाफ
हाम्रो आदरणिय कमरेड (अहिले राजिनामा दिनु भएको छ ! हुन त तपाईको यो पहिलो राजिनामा हैन) लोकेन्द्र बिष्ट मगरले एक अनलाईन मिडियालाई दिनु भएको अन्तरवार्तामा भन्नु भएको रहेछ प्रकाश दाहालले वहांलाई बाटो छेके र प्रचण्ड परिवारकै घेरामा हुनु हुन्छ ।
सर्वप्रथम त वहांलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । मुख्यत: यो लगभग ७-८ महिना अगाडीको कुरा हो । हामी एक कार्यक्रममा गएर फर्केका थियौं फर्कदा बेलुकाको ८ बजेको थियो ! तत्कालिन प्रधानमन्त्री क.प्रचण्डले मेरो ब्लड प्रेसर बडेको छ । अहिले सबै भेटघाट स्थगित गर्नु भन्नु भएको थियो । वहांकै निर्देशन अनुसार लोकेन्द्र जी त्यहां आएको थाहा थिएन र सुरक्षाकर्मीले मलाई खबर गर्नु भयो ! लोकन्द्र जी माथी आउदै हुनु हून्थ्यो वहांको र मेरो भेट भर्यांगमा भयो र महिले यस्तो यस्तो छ प्रम रेष्ट गरिरहनु भएको छ भोली बिहानै आउनु होला अहिले रेष्ट गर्न दिउ भनेकै हो । मुख्य कुरा आफ्नो स्वास्थ्य हो र प्रमको निर्देशन र वहांको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर नै महिले रोकेकै हो । जुन मेरो कर्तव्यनै हो र वहांलाई महिले भोली बिहानै आउनु भनेकै थिए ।
र अर्को कुरा वहांलाई खै किन मसंग चित्त बुझेको थिएन र मेरो विरुद्ध त्यति बेलामै फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु भएतो थियो । र महिले वहांलाई फेसबुकमा म्यासेज पठाएको थिए ( जुन अहिलेपनि मसंग सुरक्षितनै छ ) “तपाई हाम्रो नेता हो तपाईले मलाई फेसबुकमा स्टाटस लेखर भन्दापनि भेटेरै सल्लाह दिन सक्नु हुन्छ र सक्नु पर्छ । तपाई जस्तो यत्रो योगदान गरेको नेताले म जस्तो सानो कार्यकर्तालाई फेसबुकमा लेखेर ठोक्ने हैन । हामी कार्यकर्ताहरुले तपाईहरुबाट ठुलो आसा राखेका छौं” तर वहांको उत्तर आएन । भएको यहि थियो वहांसंग ८ महिना अघि !
लोकेन्द्र सर एउटा कुरा जुन तपाईले प्रचण्डमाथी आरोप लगाएर पार्टी छोडेको घोषणा गर्नु भएको छ । प्रचण्डलाई भेट्न दलाल ठेकदार ‘र’ का मान्छे सजिलै जान्छन् ।आरोप लगाउन सजिलो छ । किनकी आरोपको लागि कुनै प्रमाण चाहिदैन् । अर्को कुरा प्रचण्ड त्यस्तो घेरा र हामीले वहांलाई निस्वार्थ सहयोग नगरेको भए वहांको १० महिने कार्यकाल संसारले सफल सरकारको उपाधी दिन सक्थ्यो ? के व्यापारी र दलालले घेरेका मान्छेले त्यति काम गर्न सक्थे ? असफल गए गुज्रेको सरकार हुनु पर्ने जुन प्रकारले तपाईले आरोप लगाउनु भएको छ । यहि प्रमाण छ । के एउटा उदाहरण दिन सक्नु हुन्छ त्यो १० महिने कार्यकालमा कुन कुन व्यापारी दलाल र ‘रअ’ का मान्छेले प्रचण्डलाई घेरे ? तर तपाईले को को लिएर बालुवाटार आउनु भयो सब रेकर्ड छ मसंग ।यस्तो आरोप लगाएर पन्छिने र पलाएन हुन सजिलो छ तर जिम्मेवारी लिन गाह्रो हुन्छ । त्यति बेला १० महिनामा हामीले के के गर्यौ त्यस्ता व्यापारी, दले र फाईल बोकेर हिड्नेलाई कसरी रोक्यौ र प्रमलाई राष्ट्रकै बारे सोच्ने समय अधिकतम मिलायौ र वहां र पार्टीलाई सफल बनायौ यो वहांको कार्यकाल सफलताले नै प्रमाणित गर्छ । अहिलेपनि हामी अध्यक्षलाई पुरापुर समय पार्टी निर्माण र राष्ट्रलाई सर्बोपरी राख्ने भेटलाईनै प्राथमिकतामा राखेका छौं । यहां फाईल बोकेर कुनै दलाललाई बोकेर आउनेको लाईन कम हूंदैन र हामीले कसरी रोकेका छौं हामीलाई राम्रोसंग थाहा छ । यसरी आरोप लगाएर पन्छिन सजिलो छ ।
अर्को कुरा तपाई माओवादीको नेतृत्व तहको नेता हूनु हुन्छ । तपाईहरबाटै नेतृत्व भएको जनयुद्धमा दशौं हजारको बलिदानी भएको छ त्यसको जिम्मेवारी तपाई हामी सबै छौं । ति शहिद, घाईते , बेपत्ताको जिम्मेवारी र तिनका सपना यसरी अरुलाई आरोप लगाएर पन्छिने अधिकार तपाईमा छैन । सबै मिलेर वहांहरुको सपना पुरा गर्ने हो । अझै पनि तपाई जस्तो हाईटको नेता आरोप लगाएर पन्छिनु र भाग्नु भन्दा सामना गरौं । यसरी पार्टी छोडे भनेर अन्तरवार्ता दिनु भन्दा यहि पार्टी र ति हजारौ सहिद, घाईते वेपत्तालगायत जनयुद्धमा योगदान र बलिदान दिनेहरुका सपना पुरा गर्न लागौं । नेतृत्व गर्नुस् हामी तपाईका कार्यकर्ता हौं ।निर्देशन पालना गर्ने सिपाही हौं । हामीपनि २०५७ सालदेखि पूर्णकालिन भई सबै त्यागेर हिड्ने पार्टीका सिपाही हौं । अन्तमा पार्टी छोडेर हिड्ने अधिकार तपाईमा छैन । (माफ गर्नु होला सार्वजनिकरुपमा आएको हूंदा महिलेपनि सार्वजनिकरुपमा सत्य कुरा लेखे)
फरक शैलीमा घरदैलो गर्दै चितवनका काँग्रेस ६ मंसिर २०७४, बुधबार १९:५०
वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पहाडमा भोट माग्दै ६ मंसिर २०७४, बुधबार १९:१८
पाँच वर्षभित्र देशलाई कायापलट गर्छौं : ओली ६ मंसिर २०७४, बुधबार १७:१२
लागू औषध सहित दुई पक्राउ ६ मंसिर २०७४, बुधबार १७:०५
गोरखाको २७ मतदान केन्द्रमा हेलिकप्टरबाट मतदान सामग्री लगियो ६ मंसिर २०७४, बुधबार १७:००
साईराम डेन्टलद्धारा विद्यार्थीहरुको निशुल्क दन्त परिक्षण, हेरौँ ५ फोटो ६ मंसिर २०७४, बुधबार १६:५१
फरक शैलीमा घरदैलो गर्दै चितवनका काँग्रेस
पाँच वर्षभित्र देशलाई कायापलट गर्छौं : ओली
लागू औषध सहित दुई पक्राउ
गोरखाको २७ मतदान केन्द्रमा हेलिकप्टरबाट मतदान सामग्री लगियो
कार्तिक २८, भरतपुर। माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मतदातालाई किन्न खाेज्नेहरुकाे पैसा कब्जा गर्न.....
चितवनमा सभा र ¥याली सहित बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले उम्मेद्वारी दर्ता गर्दै, सुरक्षाका लागि सेना परिचालन (फोटो सहित)